यो हाइपोथायरायडिजमको साथ बाँच्न कस्तो हो: व्यक्तिगत निबन्ध - समुदाय | सेप्टेम्बर 2021
समाचार, कल्याण कम्पनी, औषधि जानकारी चेकआउट घरपालुवा जनावर कल्याण औषधि बनाम मित्र मनोरञ्जन स्वास्थ्य खेलहरु प्रेस औषधि जानकारी, समाचार भारी खेल स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समुदाय, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा
मुख्य >> समुदाय >> यो हाइपोथायरायडिजमको साथ बाँच्न के हो
जब म १ 18 बर्षको थिएँ, मलाई हाइपोथायरायडिज्म पत्ता लागेको थियो - मूलतया मेरो थाइरोइडले वास्तवमा काम गरिरहेको थिएन। त्यस समयमा म कलेजमा भर्खरको थिएँ र थाईरोइड के हो भनेर पनि यकिन थिएन। मलाई यो अस्पष्ट थियो कि यो तपाईंको शरीरको हिस्सा हो, तर मलाई थाहा थिएन कि यसले के गर्यो। र मैले सोचे कि थाइरोइड समस्याहरू त्यस्तो चीजहरू हुन् जुन केवल वृद्ध मानिसहरूले व्यवहार गर्छन्। मलाई मेरो उमेर कसैलाई थाहा छैन जसको दीर्घकालीन चिकित्सा अवस्था थियो, जसलाई हरेक छ महिनामा डाक्टरसँग भेट्नु पर्ने थियो, वा जसले दैनिक नियन्त्रणमा थिएन जुन जन्म नियन्त्रण थिएन।
मलाई त्यतिबेला के कुरा थाहा थिएन, र मेरो व्यस्त स्वास्थ्य क्लिनिक चिकित्सकले मलाई के भनेन, त्यो हाइपोथायरायडिजम वास्तवमै एकदम सामान्य हो। त्यहाँ प्रति वर्ष othy० लाख भन्दा बढी नयाँ व्यक्तिहरू हाइपोथायरायडिजमका साथ बाँचिरहेका छन्। म भाग्यशाली थिएँ कि म भेटमा गएकी थिएँ जहाँ नियमित रक्तचापले सामान्य अवस्थाको कुनै अनुभव नगरी अवस्था देखा पर्‍यो।
हाइपोथायरायडिजम भनेको के हो?
हाइपोथायरायडिज्म एक अवस्था हो जब थाइरोइड ग्रंथि थाइरोइड हर्मोनको अधिकतम स्तर बनाउन असमर्थ हुन्छ, वर्णन गर्दछ अनीस रहमान, एमडी , एक सहायक प्रोफेसर र दक्षिणी इलिनोइस विश्वविद्यालय मा स्कूल - चिकित्सा जो एक लेखकका लागि लेख्छन् जिल्ला Endocrine ।
हाइपोथायरायडिज्म कस्तो महसुस हुन्छ?
यो पूर्ण asymptomatic हुन सक्छ वा थकान, चिसो संवेदनशीलता, सुख्खा छाला, कपाल पातलो, कब्ज, वजन, हार्स आवाज, मांसपेशियों को दर्द, र धीमा हृदय गति को रूप मा धेरै गैर विशिष्ट लक्षण संग प्रस्तुत हुन सक्छ।
हाइपोथायरायडिजमको उपचार कसरी गरिन्छ?
प्राय: hy, hypomotroidism उपचार थाइरोइड हार्मोन को प्रतिस्थापन शामिल छ। लेवोथिरोक्साइन सस्तोमा उपलब्ध उपचार विकल्प हो र एफडीए अनुमोदित छ, डा। रेहमान भन्छन्।
हाइपोथायरायडिजममा बस्ने धेरैजसो मानिस जस्तै, म मेरो अवस्था औषधीको साथ ब्यवस्थापन गर्दछु, प्रतिस्थापन थाइरोइड हर्मोन जुन मेरो शरीरको थाइरोइड आपूर्ति गर्दैन त्यहाँ भरिन्छ।यो प्रिस्क्रिप्शन हो जुन म १ doctors बर्ष भन्दा बढि मेरा डाक्टरले सिफारिस गरेको छु।
अर्को पढ्नुहोस्: थाइरोइड उपचार र औषधि
हाइपोथायरायडिजमको उपचार नगरेमा के हुन्छ?
यदि मैले मेरो हाइपोथायरायडिज्मको उपचार नगरेमा यो कारण हुन सक्छ गम्भीर जटिलता जस्तै गोइटर, मुटुको असफलता, मुटुको लय समस्या, मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू, माईक्सेडेमा कोमा, बांझपन, र जन्म दोषहरू।
कसरी घर मा चाँडै रक्तचाप कम गर्न को लागी
सही चिकित्सक खोज्दै
किनभने म पहिलो पटक निदान भएदेखि एसेम्प्टोमेटिक हुँ, मेरो लागि हाइपोथायरायडिजमको नेभिगेट गर्ने सबैभन्दा गाह्रो हिस्सा सही डाक्टर पत्ता लगाइरहेको थियो। म एक जना चिकित्सक चाहान्छु जसले मलाई एक व्यक्तिको रूपमा व्यवहार गर्‍यो, एक तथ्या as्कको रूपमा मात्र होइन - जो LGBTQ- धाराप्रवाह थियो र जसले वजन घटाउन धकेल्ने थिएनन्। यसको मतलब सम्भावित डाक्टरहरूसँग उनीहरूको हेरचाह स्थापना गर्नु अघि धेरै सन्दर्भ र अन्तर्वार्ता हुन्।
कब सम्म ibuprofen सुरक्षित छ?
थाइरोइड तपाईंको शरीरको ब्यारोमिटर हो; यसले तपाईंको हृदयलाई कत्तिको छिटो पार्छ त्यसबाट सबै दिन नियन्त्रण गर्दछ तपाईं प्रति दिन कति आंत्र आन्दोलनहरू हुन्छन्, रोमी ब्लक, एमडीका अनुसार एन्डोक्राइनोलजीका डिभिजन प्रमुख नर्थशोर विश्वविद्यालय स्वास्थ्य प्रणाली । हाइपोथायरायडिज्मको सब भन्दा सामान्य कारण एक अटोइम्यून रोग हो जुन परिवारमा चल्छ - जसलाई भनिन्छ 'हाशिमोटोको थाइरोइडिटिस।' यो तब हुन्छ जब तपाईंको आफ्नै शरीरले तपाईंको थाइरोइडलाई आक्रमण गर्दछ र यसलाई बन्द गर्दछ। सबैभन्दा सामान्य उपचार लेभोथेरोक्साइन पनि हो।
यसले डाक्टरको भ्रमणको एक दशक लिई सही चिकित्सकले पत्ता लगाउनु भन्दा पहिले कि मेरो हामिरिटि थाइरोइड पछाडि हाशिमोटोको हात छ। जब नाम डरलाग्दो छ, यसले वास्तवमा मेरो स्वास्थ्य वा उपचार योजनामा ​​कुनै प्रभाव गरेको छैन। तर यसले अन्ततः यो बुझाइयो कि मेरो थाइरोइड रगत कार्य स्तर प्राय जसो हिचकिचाउँदैन र मेरो उपचार समायोजनको बाबजुद मेरो खुराक समायोजित गर्न आवश्यक छ।
हाइपोथायरायडिज्मको साथ बस्ने
इमानदारीपूर्वक, हाइपोथायरायडिज्म मेरो पूर्ण जीवनको सानो हिस्सा मात्र हो। म मेरो औषधि लिन्छु। म आफ्नो डाक्टरलाई रगतको कामहरू प्रत्येक केही महिनामा गर्न को लागी हेर्न जान्छु, र म मेरो सबै भन्दा राम्रो जीवन बिताउँछु! म गुनासो गर्न सक्दिन, र मलाई लाग्छ कि यो थाईरोइड सर्तहरूको बारेमा कथा बदल्न वास्तवमै महत्त्वपूर्ण छ। तिनीहरू केहि भयानक चीजहरू होइनन्। उचित उपचारको साथ तपाईले छिटो नै राम्रो महसुस गर्न थाल्नुहुनेछ।
यदि म कलेजमा छ जब म एक वार्षिक शारीरिक छैन थियो, म शायद म थाईरोइड मुद्दा थियो भनेर थाहा छैन। यो केवल एक उदाहरण हो कि किन यो प्राथमिक हेरचाह चिकित्सक स्थापना गर्न यत्तिको महत्त्वपूर्ण छ - र त्यसपछि जाँच पाउनुहोस् (तपाईंको उमेरले फरक पार्दैन)! हाइपोथायरायडिज्म, जब निदान गरियो र उपचार नगरिएमा चिकित्सा जटिलता निम्त्याउन सक्छ। केवल एक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक जो तपाइँको आवश्यकता र तपाइँको मानहरु फिट फेला पार्न को लागी सुनिश्चित गर्नुहोस्। तपाईका चिकित्सकले तपाईलाई एक व्यक्तिको रूपमा देख्नुपर्दछ, रोग मात्र उपचार वा व्यवस्थित गर्नका लागि।
Caveman आहार: पालीओ बनाम प्राइमल
डिम्बग्रंथि क्यान्सर को लागी जागरूकता निर्माण एक आवश्यकता हो
फ्लू जस्तै लक्षण संग के खाने
उमेर अनुसार प्रति मिनेट सामान्य मुटुको धड्कन
तपाइँ कसरी एक खमीर संक्रमण को उपचार गर्नुहुन्छ?
के तपाइँ तपाइँको प्रणाली मा शराब संग benadryl लिन सक्नुहुन्छ
एक साइड मा 555 संग सेतो पट्टी गोली
घाँटी दुखाई को लागी नींबू को रस राम्रो छ